၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာအတွင်း ထရမ့်ကို စွပ်စွဲပြစ်တင် ဖြုတ်ချရန် နယူးယောက်တွင် တောင်းဆိုကြစဉ်/ The Guardian
By ဧရာဝတီ 14 January 2021
သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို ဒုတိယအကြိမ် စွဲချက်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး အောက်လွှတ်တော်တွင် နှစ်ကြိမ် စွဲချက်တင်ခံရသော ပထမဆုံး အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် သမိုင်းဝင်သွားပြီဖြစ်သည်။
ယခု ထွက်ပေါ်နေသော မေးခွန်းမှာ သူသည် အထက်လွှတ်တော်ကလည်း စီရင်ပြီး ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရသော ပထမဆုံး အမေရိကန်သမ္မတ ဖြစ်လာမည်လားဟူသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။
ရှေ့အလားအလာ မည်သို့ ရှိသနည်း။
စွဲချက်တင်သောလုပ်ငန်းသည် အပိုင်း နှစ်ပိုင်းပါသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ စွဲချက်တင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မကို အောက်လွှတ်တော်က တင်သွင်းအတည်ပြုသည်။ သို့သော် စွဲချက်တင်ခံရသူသည် အမှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြစ်ဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ရမည့်နေရာမှာ အထက်လွှတ်တော်ဖြစ်သည်။
အထက်လွှတ်တော်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် မည်သို့ ပြဋ္ဌာန်းထားသနည်း။
သိပ်များများစားစားပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိပေ။ ပုဒ်မသည် အတော်အတန်ရိုးရှင်းသည်။
“အထက်လွှတ်တော်သည် စွဲဆိုချက်အားလုံးကို ပြုလုပ်ရန် တခုတည်းသော အာဏာပိုင်ဖြစ်ရမည်။ ထိုကိစ္စကို ကြားနာသောအခါ အထက်လွှတ်တော်သည် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို သို့မဟုတ် တရားဝင်ကြေညာထားရမည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတကို စွဲချက်တင်သောအခါ တရားသူကြီးချုပ်က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ တက်ရောက်သောအဖွဲ့ဝင်များ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ၏ သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ မည်သူကိုမျှ မစီရင်ရ” ဟူ၍ အပိုဒ်-၁၊ ပုဒ်မ-၃ တွင် ပြဌာန်းထားသည်။
ချမှတ်ပြီး စည်းမျဉ်းများ ရှိပါသလား။
ရှိပါသည်။ ၁၈၆၈ ခုနှစ် အင်ဒရူးဂျွန်ဆင်ကို စွဲချက်တင်ရာတွင် ပထမဆုံး ချမှတ်ခဲ့သည့် စည်းမျဉ်းများရှိပြီး ထိုစည်းမျဉ်းများကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ခေတ်နှင့်လျှော်ညီအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကြားနာစစ်ဆေးမှု မစတင်မီ အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုသည်။ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် နေ့စဉ် သတိပေးသည်။ တရားသူကြီးချုပ်တွင် တိကျသော တာဝန်များ ရှိသည်။ ဆွေးနွေးရန်နှင့် ငြင်းခုန်ရန် ကန့်သတ်ထားသော အချိန်ရှိပြီး အထက်လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ထရမ့်၏ ဝတ်လုံတော်ရ၏ အောက်လွှတ်တော်သို့ မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းအားလုံးကို စာဖြင့် တင်သွင်းကာ တရားသူကြီးချုပ်က ဖတ်ကြားရမည်။
ကြားနာမှု မည်သည့်အချိန်တွင် စတင်မည်နည်း။
ထိုကိစ္စကို လုံးဝရှင်းလင်းစွာမသိရပါ။ အစောဆုံး ထရမ့်၏ ရာထူးသက်တမ်းနောက်ဆုံးနေ့(ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့) မတိုင်မီ အထက်လွှတ်တော် က်ိုယ်စားလှယ်များကို ခေါ်ယူမည်မဟုတ်ကြောင်း အထက်လွှတ်တော် လူများစု ခေါင်းဆောင် မစ်ချ် မက်ကွန်းနဲလ်က မဲမခွဲမီက ပြောသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှောင်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်သည် ကြေညာချက်တွင် ကြားနာစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ် ထိုအခါမှသာ စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူပြောသည်။
ကြားနာစစ်ဆေးမှုကို တရက်တည်း အပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလား။
လုံး၀ မပြီးနိုင်သလောက်ပင်။ အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ထရမ့်ကို စွဲချက်တင်ရန်နှင့် သူ၏ရှေ့နေက ပြန်လည်ဖြေကြားရန် ရက်အတန်ကြာ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ် အတန်ကြာ အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြားနာစစ်ဆေးမှုသည် သမ္မတရွေးချယ်ခံရသူ ဘိုင်ဒင် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရာထူးလွှဲပြောင်းလက်ခံပြီးသည်အထိ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် ထရမ့်သည် အထက်လွှတ်တော် ကြားနာစစ်ဆေးမှု မတိုင်ခင် ရာထူးလွှဲပြောင်းပြီးဖြစ်မည်လား။
မှန်ပါသည်။ အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် သမ္မတဟောင်းကို စွဲချက်တင်ခြင်းအား မဲခွဲမည်ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မတဟောင်းတယောက်ကို စွဲချက် ကြားနာ စစ်ဆေးမှု မည်သည့်အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။
အရာရှိဟောင်းများကို စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော စီရင်ထုံးဟောင်း ရှိသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကာလလွန် စွဲချက်တင်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ စွဲချက်တင် ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း စီရင်ချက်၏ အဓိက ပြစ်ဒဏ်မှာ ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သော်လည်း အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် အနာဂတ်တွင် ထရမ့်ကို နိုင်ငံရေးရာထူးယူခြင်းမှ ပိတ်ပင်တားဆီးရန် မဲပေးနိုင်သည်။ (ထရမ့်သည် ၂၀၂၄ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သမ္မတရာထူးအတွက် မယှဉ်ပြိုင်ဟု ပြောဆိုထားခြင်း မရှိသည်ကို သတိရပါ။) သူသည် သူ၏ ဒေါ်လာ သိန်းချီသော အငြိမ်းစားလစာနှင့် အခြား အငြိမ်းစားသမ္မတ ဆုကြေးများကိုလည်း ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
သို့သော် ဂျိုးဘိုင်ဒင် သမ္မတဖြစ်လာမည်။ အထက်လွှတ်တော်သည် အခြားကိစ္စများအတွက် အလုပ်များနေမည် မဟုတ်လော။
အလုပ်များမည်။ အရေးကြီးသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ဘိုင်ဒင်အစိုးရအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများကို အတည်ပြုရန် ကြားနာမှုများအတွက် အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အလုပ်များနေမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအတွက် အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားသူ အန်ထော်နီ ဘလင်ကန်၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူ လွိုက်အော်စတင်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူ ဂျဲနက်ယဲလန်နှင့် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဝန်ကြီး အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူ အယ်လက်ဂျန်ဒရိုမေယောကာ့စ် အပါအဝင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသူ အနည်းဆုံး ၄ ဦးကို ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ ရက်သတ္တပတ်တွင် ကြားနာရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတဝန်း ကူးစက်ရောဂါ သို့မဟုတ် စီးပွားရေး အကူအညီပေးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ရေးဆွဲရန်လည်း အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ငွေကို ဘိုင်ဒင်က ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ သို့ တိုးမြှင့်လိုသည်။
ထို့ကြောင့် စွဲချက်တင်ခြင်းကိစ္စသည် ၎င်းတို့အတွက် တခုတည်းသော လုပ်ဆောင်ရန် ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ အထက်လွှတ်တော်သည် နေ့စဉ်အချိန်၏ တစိတ်တပိုင်းကိုသာ ထရမ့်၏ အမှုအတွက် သုံးရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ စည်းမျဉ်းအရ ၎င်းတို့သည် အမှုကို ကြားနာရန် အထူးကော်မတီတရပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်သော်လည်း ထိုသို့လုပ်မည့် အလားအလာ ရှိပုံမရပေ။
မှတ်သားထားရမည်မှာ မစ်ချ် မက်ကွန်းနဲလ်သည် လက်ရှိ အထက်လွှတ်တော် အများစု ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အစီအစဉ်ကို ချမှတ်သော်လည်း ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ကကျင်းပသည့် ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များကို အတည်ပြုလိုက်သည်နှင့် ထိုရာထူးကို ဆုံးရှုံးကာ ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်သစ်များဖြစ်သော ဂျွန် အော့ဆော့ဖ်နှင့် ရာဖေးလ် ဝါးနော့တို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်လာမည်။ ထိုအခါ နယူးယောက်မှ ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ချပ် ရှူးမားသည် အထက်လွှတ်တော် လူများစုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီး ကြားနာစစ်ဆေးမှုများကို ပိုမိုထိန်းချုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ပထမအကြိမ် ထရမ့်ကို စွဲချက်တင်ချိန်က အောင်မြင်ခြင်း မရှိပေ။ ယခုအကြိမ်နှင့် မည်သို့ ကွာခြားသနည်း။
တခွန်းတည်းသော အဖြေမှာ ရီပတ်ဗလစ်ကန်များပင် ဖြစ်သည်။ ထရမ့်အပေါ် ပထမအကြိမ်စွဲချက်တင် ကြားနာစဉ်က တဦးတည်းသော ရီပတ်ဗလစ်ကန် အထက်လွှတ်တော်က်ိုယ်စားလှယ် ယူတား ပြည်နယ်မှ မစ် ရွမ်နေ တဦးတည်းကသာ ထရမ့်ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားရန် မဲပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင်မူ မက်ကွန်းနဲလ်သည် ထရမ့်ကို ကာကွယ်မည့်အစား ထရမ့်ကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ရီပတ်ဗလစ်ကန် ပါတီမှ ထုတ်ပစ်ရန်အတွက် စွဲချက်တင်သည့် အားထုတ်မှုအား ကျေနပ်လက်ခံသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ထရမ့်ကို အပြစ်ပေးရန် မဲ ပိုမို ရနိုင်ပါသလား။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိလှပါ။
ထရမ့်ကို စီရင်ရန် မဲ မည်မျှလိုသနည်း။
မဟာ မေးခွန်းဖြစ်သည်။ စီရင်ချက်ချရန် တက်ရောက်သူ သုံးပုံနှစ်ပုံ၏ မဲလိုသည်။ အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ လုံးတက်ရောက်လျှင် ၆၇ ဦးက ထောက်ခံရန် လိုသည်။ ဂျော်ဂျီယာမှ အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သစ် ၂ ဦးကို အတည်ပြုပြီးလျှင်ပင် နှစ်ပါတီလုံးတွင် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ၅၀ စီသာရှိပြီး ရီပတ်ဗလစ်ကန်မဲ ၁၇ မဲ လိုဦးမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် တက်ရောက်သူ ၃ ပုံ ၂ ပုံ၏ ထောက်ခံမဲ လိုအပ်စေသော စည်းမျဉ်းများကို အသေးစိတ်အာရုံစိုက်ရန် လိုသည်။ ဂျော်ဂျီယာမှ ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သစ်များကို အတည်မပြုနိုင်သေးပါက အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၆ ဦး၏ ထောက်ခံမဲသာ လိုမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သော ရီပတ်ဗလစ်ကန်များသည် ထရမ့်ကို ဆန့်ကျင်သည့် မဲမပေးသကဲ့သို့ စီရင်ချက်ချရန် မဲကိုလည်း မပေးလိုသောကြောင့် မဲခွဲခြင်းကို ရှောင်ရှားလျှင် မဲအချိုးအစား ထပ်မံပြောင်းလဲရန် ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စများ ယခင်ကလည်းဖြစ်ဖူးကြောင်း သိရသော်လည်း စွဲချက်တင်ကြားနာမှုအတွင်း မဟုတ်ပေ။
ထရမ့်ကို ပထမအကြိမ် စွဲချက်တင်ခြင်းအပါအဝင် ယခင်ကလည်း သမ္မတကို စွဲချက်တင်မှုများရှိသည်။ သမ္မတ အင်ဒရူးဂျက်ဆင်ကို စွဲချက်တင်သော်လည်း ရီပတ်ဗလစ်ကန် ၇ ဦးက ပါတီကို ဆန့်ကျင်သောကြောင့် ကြားနာ စစ်ဆေးမှုတွင် မဲတမဲတည်းဖြင့် စီရင်ခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်သွားသည်။ ထိုစွဲချက်တင်ခြင်းအပြီးတွင် ဂျွန်ဆင်သည် ရွေးကောက်ပွဲ မနိုင်တော့ပေ။ သမ္မတ ဘေလ်ကလင်တန်ကို သူ၏ ဒုတိယ သက်တမ်းတွင် စွဲချက်တင်သော်လည်း အလွယ်တကူ လွတ်မြောက်သွားသည်။ မဲ သုံးပုံနှစ်ပုံရရန် များစွာလိုနေပြီး အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အများအပြားက သူ့ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်းကို မထောက်ခံကြပေ။ ထရမ့်ကို ပထမအကြိမ်စွဲချက်တင်စဉ်ကလည်း ထိုရလဒ်မျိုးသာဖြစ်သည်။ ရွမ်မနေ တဦးတည်းသာ ဒီမိုကရက်တို့နှင့်ပေါင်းပြီး ထရမ့်ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားရန် အထက်လွှတ်တော်တွင် လိုအပ်သော မဲအများစု မရခဲ့ပေ။
ကိုးကား။ ။ CNN မှ Trump’s been impeached again. What’s next?
Topics: ဂျိုးဘိုင်ဒင်, ဒေါ်နယ်ထရမ့်, ပထမဆုံး အမေရိကန်သမ္မတ, အထက်လွှတ်တော်, အောက်လွှတ်တော်